Filtrer les éléments par date : jeudi, 08 août 2019
jeudi, 08 août 2019 22:21
Toby Jeneraly Ramarolahy - Betongolo: Fanaovam-beloma farany an'i CB Befandriana Avaratra
Nisy ny seremonialy miaramila, nanaovana veloma farany ny nofo mangatsiakan’ny GPCE Solohery, Komandin’ny Tobim-paritry ny Zandarimaria Befandriana Avaratra notanterahina tao amin’ny Toby Jeneraly Ramarolahy etsy Betongolo Antananarivo, androany 08 aogositra 2019 maraina.
Naratra mafy nandritra fanafihan-jiolahy nitranga tao Befandriana Avaratra ny alin’ny 29 jolay 2019 izy. Naratra niaraka taminy ny Ben'ny tanànan'i Belalòna. Nakarina tamin’ny fiaramanidina teto Antananarivo, notsaboina tao amin’ny hopitaly Miaramila Soavinandriana izy ireo, ny andro nisehoan’ny fanafihana, noho ny ratra mafy nahazo azy ireo.
Nodimandry ny voalohan'ny volana teo ny Ben'ny tanànan'i Belalòna. Nodimandry ny 07 Aogositra 2019 tamin’ny 12 ora atoandro ny GPCE Solohery, na dia nanao ny alanenina rehetra aza ny mpitsabo.
jeudi, 08 août 2019 21:54
Lalana Sambava-Andapa: Lozam-piarakodia roa nielanelana andiny 5 tamin’ny toerana iray
Maty avy hatrany ilay mpamilin’ny kamiao iray raha vao tonga teny amin'ny hopitaly Besopaka Sambava tamin'ity lozam-pifamoivoizina nahatsiravina, izay niseho tao Andongona Andranomifototra, Distrikan’Andapa androany tokony tamin'ny 4ora maraina.
Olona telo no tao amin'ny ''devant'' an’ity kamiao ity, ka vehivavy mitondra vohoka enim-bolana ny iray. Samy nisokirina avokoa no nahafahana azy ireo.
jeudi, 08 août 2019 21:40
FIVPAMA: Lany filoha vaovao Razafiarison Andrianavalomanana
Razafiarison Andrianavalomanana no filoha vaovao hitantana ny FIVPAMA na ny fivondronan'ny mpandraharaha eto madagasikara. Izy izany no nisolo ny toeran'i andriamatoa Erick Rajaonary izay filoha teo aloha.
jeudi, 08 août 2019 21:36
Trafika lavanila: Voasazy 10 volana an-tranomaizina, sazy mihatra i Jimmy Georges
Niakatra fitsarana androany 08 aogositra 2019 i Jimmy Georges, mpandraharaha lavanila aty Fenoarivo Atsinanana. Tratra nitondra lavanila 200kg tao anaty fiara niaraka tamina olona efatra izy, nefa tsy mbola nisokatra ny taom-piotazana lavanila.
Notazomina am-ponja vonjimaika izy ireo nanomboka tamin’ny 08 may 2019, niandry ny fotoam-pitsarana azy. In-droa nangataka fahafahana vonjimaika izy taorian’izay, fa nolavin'ny Fitsarana hatrany.
Raha nivoaka ny didy androany 08 aogositra 2019, dia 10 volana an-tranomaizina sazy mihatra no saziny sy ireo olona efatra tra-tehaka niaraka taminy nitondra lavanila.
jeudi, 08 août 2019 21:16
Kitra - Total CAF Champions League 2019: Fosa Juniors # Pampelmousse SC
Tonga androany alakamisy eto Madagasikara ny ekipan’ny Pamplemousse SC avy atsy Maorisy. Hiatrika lalao mandroso amin’ny dingana savaranonando amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny ekipa tompondaka, na Total CAF Champions League 2019 izy ireo, lalao izay hatao ao amin’ny Stade Rabemananjara - Mahajanga, ny tolakandron’ny sabotsy 10 aogositra 2019.
Hifandona amin’izany ny klioban’ny Fosa Juniors (Mahajanga) sy ny Pampelmousse SC.
jeudi, 08 août 2019 21:01
Parlement Panafricain: Madagascar participe à la 10ème Conférence annuelle des Présidents des Parlements
Madagascar est représenté à cette Conférence de Midrand (Afrique du Sud) du 6 au 7 août 2019 par une délégation conduite par le Président du Sénat, Rivo Rakotovao, accompagné à l’occasion par le Vice-Président du Sénat pour la province de Mahajanga, Bienvenu Manjany, ainsi que du Directeur de Cabinet, Luc Marcel Rakotonirina.
"Trouver des solutions durables aux migrations forcées pour accélérer l'intégration et le développement de l'Afrique: le rôle des parlementaires nationaux et régionaux ", tel est le thème choisi cette année.
Lors de son discours d'ouverture, Roger Nkodo Dang, Président du Parlement Panafricain (PAP), a mis en exergue l'importance du rôle et de la place des législateurs par rapport aux migrations forcées, un fléau qui sévit le continent Africain. La crise politique, l'insécurité, la violation des Droits de l'homme, l'inexistence de la création d'emplois, le réchauffement climatique etc... sont parmi les causes de la migration forcée. Le Président du PAP estime que la création d'une Institution forte, en renforçant la coopération internationale constitue une des solutions.
jeudi, 08 août 2019 20:44
Sambava: Nifanome tanana ireo mpamily Taxi nanototra ireo lavadavaka amin’ny arabe
Nitsangana teny amin'ny lalana ny filohan'ny Fikambanana ''Taxi ville'' eto Sambava, Atoa Michael omaly alarobia 07 aogositra 2019, nitatitra fasika nanotofana ireo lavadavaka amin’ny lalana mampitaraina ny mponina.
« Tsy mora anefa ny nahatongavana amin'izao dingana nataonay voalohany izao », hoy Atoa Michael satria « mbola fasika aloha no vitanay amin'izao noho ny enti-manana satria vola teo amin'ny 60.000Ar no voaangonay nanakaramana ireo mpitari-posy nitatitra fasika. Hifamory indray izahay amin’ny sabotsy hitady hevitra hahitana vato kely hatao amin'ny lalana mirefy 200 metatra izay tena mampitaraina ny mpandeha, indrindra ireo tsy salama na ireo vao avy nivoaka hopitaly ».
Efa samy nampanantena ny hanamboatra an’ity alana ity na ny Praiminisitra na ny Filoham-pirenena.
jeudi, 08 août 2019 20:33
Te ho mpanarivo: Novonoiny ny zanany vavikely, ho fanatanterahana ny toromariky ny mpimasy
Ny rainy ihany no nahavita namono tamin’ny fomba feno habibiana ny zanany. Tao Marovato Andrefana, Distrika Ambanja no niseho ity zava-doza ity.
Vao efa-taona monja i Juliana. Tsy hita nanomboka ny alin’ny 23 jolay 2019 izy. Efatra andro taty aoriana, ny 27 jolay 2019, faty no hita tao amin’ny torapasik’i Marovato Andrefana, manamorona ny reniranon’i Sambirano.
Nalevina avy hatrany ny andron’ny nahitana azy ny faty, satria efa simba.
Nandeha ny fanadihadiana nataon'ny Zandary. Teo no fantatra fa ny rainy niteraka azy ihany no nahavita nandatsaka aina, tamin’ny fomba feno habibiana, ity zanany vavikely ity.
jeudi, 08 août 2019 20:16
Sarobaratra-Miarinarivo: Mirehitra ny jiro
Notokanana androany alakamisy 8 aogositra 2019 ny tobim-pamokarana herinaratra miodina amin'ny rano, sy ireo andrinjiro aty an-drenivohitry ny Kaominina Sarobaratra, Faritra Itasy. Efa nanomboka tamin’ny 1 aogositra 2019 no nirehitra ny jiro, ary mponina eo amin’ny 3000 no misitraka izany.
jeudi, 08 août 2019 20:13
Mpanohitra: Hivory voalohany
Hiatrika ny fivoriam-beny voalohany ny mpanohitra ara-politika eto Madagasikara. Ny antoko politika rehetra vonona hifanome tanana amin'ny fanarenam-pirenena no voalaza fa hifamotoana amin’io, ao amin'ny Hôtel Carlton Anosy - Antananarivo ny sabotsy 10 aogositra 2019.